के रेखा नायिकाले गीत गाएर संगीतको उपहास गरे भन्न चाहन्छिन् ?::KhojOnline.com
के रेखा नायिकाले गीत गाएर संगीतको उपहास गरे भन्न चाहन्छिन् ?
नायिका रेखा थापाले चलचित्र ‘लालजोडी’को एक गीतमा आवाज दिइन् । रेखाले स्टूडियोमा गीत गाउँदै गर्दा आफूले युटुबका लागि गीत नगाउने समेत भन्न भ्याइन् ।
तपाइको गायिका बनेर एल्बम निकाल्ने रहर छ या छैन भन्ने प्रश्नमा रेखाले आफू चलचित्रका लागि मात्र गाउने बताइन् । उनले रहरका लागि मात्र गीत गाएर संगीतको उपहास गर्न नचाहने खुलाइन् ।
अहिले केही नायिकाले आफ्नो आवाजमा गीत गाएर भिडियो सार्वजनिक गरिसकेका छन् । प्रियंका कार्की, पूजा शर्मा, छुल्ठिम गुरुङले गीत गाएर भिडियो युटुबमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
रेखालाई हामीले सोध्यौ, के त्यसो भए युटुबका लागि गीत गाउने नायिकाले संगीतको उपहास गरेका हुन् त, रेखाले बच्दै जवाफ फर्काइन्-‘मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन । उहाँहरुले राम्रो गीत गाउनु भएको होला । मैले पुरा सुन्न भ्याएको छैन ।’
आफूले सोखका लागि गीत नगाउने रेखाको भनाई छ । आफ्नै चलचित्रको गीतमा आवाज दिने रेखाको भनाई छ । चलचित्रको गीतका लागि साधना गर्न आफू तयार भएपनि सोखका लागि गीत नगाउने उनले तर्क गरिन् ।